Haweeney ka badbaadday wadno-istaag oo lagu amray inaysan uur qaadin – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Haweeney ka badbaadday wadno-istaag oo lagu amray inaysan uur qaadin
By admin on 09/11/2018 No Comment
Jimco, November, 9, 2018(HNN) Haweenka ka badbaada wadno-istaagga ay sababto xaalad lagu magacaabo SCAD ayaa caadi ahaan loo sheegaa inaysan carruur dhalin, sababo la xiriira khatarta ah inay mar kale wadno-istaag la kulmi karaan.
Haatan carruurtii ugu horreysay ayaa ku dhashay xarun caafimaad oo haweenka ka badbaaday wadno istaagga ka caawisa inay carruur dhalaan.
Hayley Martin, oo ah 47 jir, ayaa aad u xusuusata maalintii ay nolosheedu is beddeshay.
“Waan soo kacay waxaana dareemay inaan si kale ahay. Waxaan gacmaheyga saaray madaxeyga waxaana i qooyay dhidid. Waan iska garanayay inuu ahaa wadno-istaag,” ayay BBC-da u sheegtay.
Waxay ahayd 38-sano-jir caafimaad qabta, markii lagu arkay xaaladda SCAD, oo ah xaalad dhif ah.
Waa tan koowaad ee haweenka ku jira da`da dhalmada ku keenta wadno-istaagga, waxayna xaaladdaasi sababtaa ku dhowaad 1,000 haween ah sanadkii.
Waxay xaaladdaasi timnaaddaa marka uu dillaac degdeg ah ku yimaado mid ka mid ah xiidmaha dhiigga u gudbiya wadnaha.
Iyadoo isbitaalka ku jirta, ayaa Hayley, oo ka soo jeedda magaalada Congleton ee Cheshire, dalka Ingiriiska waxay sheegtay inay ka baqeysay in waxa ugu darn ay dhacaan.
“Waxaan xusuusan karaa anigoo ayaga u sheegaya, ‘ waan dhimanayaa?’ waxayna sii wateen inay dhahaan, ‘waan isku daynay wax walba oo aan awoodnay, balse waxba ma shaqeynayaan,'” ayay tiri.
‘Waxaan dareemay in haweennimadeyda ay hooseyso’
Way badbaadday, balse sida haween kale oo badan oo SCAD qaba, waxaa loo sheegay inaysan uur yeelan haddii kale ay khatar u galeyso in mar kale uu wadno-istaag ku dhaco.
“Waxaan u maleynayaa inay ahayd wax kale oo aniga layga xaday, sidaa darteed badanaa uma oggolaado nafteyda inay ka fekerto arrintaas, sababtoo ah waxay ku dhex geyneysaa waddo mugdi ah oo murugo leh,” ayay tiri Hayley.
“Waxaan dareemay inaanan waxba ahayn, haweennimadeyda ay hooseyso, oo aan guul darreystay.”
Waa maxay SCAD?
Kala go`a degdegga ah ee xiidmaha (SCAD) waa xaalad wadnaha la xiriirta oo aan badanaa baaritaan lagu ogaan
Waxay badanaa saameysaa haweenka, mararka qaar iyagoo uur leh amaba isla marka ay dhalaan kaddib
Dhiigga caadada oo istaaga, walbahaar xad-dhaaf ah iyo jimicsiga ayaa sidoo kale lala xiriiriyaa
Marka wadno-garaacu dhaco, dillaac degdeg ah ayaa ku dhaca mid ka mid ah xiidmaha taas oo sababeysa inuusan dhiiggu raacin xididdada kale
Waxay sababi kartaa dhimasho, wadnaha oo istaaga, wuxuuna qofku u baahan karaa qalliin
Hayley waxay ka mid tahay haweenka Dr Abi Al-Hussaini oo wadnaha ku takhasusutay ay isku dayeyso inay ku caawiso xarunteeda caafimaad ee ku taalla Chelsea iyo isbitaalka Westminster.
Dr Al-Hussaini waxay qiimeyn ku sameysaa waxyeellada ay xaaladda SCAD gaarsiisay wadnaha, waxayna dib u eegis ku sameysaa daaweynta ku socota bukaanka.
Warbixintaas ayay u adeegsataa inay bukaanka kala taliso khatarta uu uurku sababi karo.
Tani waxay mararka qaar micnaheedu tahay in khatarta caafimaad ay sarreyso, balse muhiimaddu waa in bukaanku uu go`aan gaaro, intii la siin lahaa talo qaawan oo ku saabsan inaysan haweeneydu uur qaadi karin.
Haddii mid ka mid ah bukaannadeeda ay go`aansato inay uur qaaddo, waxaa lagu xiraa koox si gaar ah ula socota inta ay uurka leedahay.
“Waxaan sanadihii ugu dambeeyay arkaa haween badan oo aan faraxsaneyn, kuwaasoo loo sheegay inaysan weligood carruur dhali karin,” ayay tiri.
“Taasina waa mid ka mid ah sababaha aan u sameeyay xaruntan caafimaad, si bukaannadaas loo siiyo talada saxda ah loona oggolaado inay qaataan go`aan ay ka war qabaan.”
Waxay aaminsan tahay in baaritaan la`aan xaaladda ku saabsan ay sabab u tahay in dhaqaatiir badan oo cudurrada wadnaha ku takhasusay ay bukaannada siiyaan talo qaawan.
Mid ka mid ah haweenkii ugu horreeyay ee ay xaruntu caawisay waa Julie Murphy, oo 40 jir ah, kana soo jeedda Ruislip.
Wax yar kahor markii ay arooska ka baxday sanadkii 2013, waxay dareentay xanuun, sida inuu hargab hayo. Xilli ay fasax ku joogtay Kenya, xaaladdeeda way ka sii dartay.
Kaddib, iyadoo dabaalaneysa, waxay xanuun daran ka dareentay xabadkeeda. Markii ay guriga tagtay, waxaa baaritaan lagu sameeyay wadnaheeda, “maalintii xigtay waxaan ogaaday in wadno-garaac uu ahaa”.
Maalmahaas iyo toddobaadyadii xigayba kuwo adag ayay u ahaayeen.
“Dhammaan daawooyinkii la i siiyay waxay iga dhigeen nuxuus xitaa ma kori Karin jaranjarada markii aan isbitaalka kai mid. Xitaa way igu adkeyd inaan madaxeyga dhaqaajiyo,” ayay tiri.
Sida Hayley, Julie waxaa loo sheegay inaysan carruur dhali Karin. Balse waxay qayb ka noqotay baaritaan ay sameysay Dr Al-Hussaini waxayna dhashay gabadheedii ugu horreysay, Holly, sanadkii 2015.
Kaddib waxay noqotay mid ka mid ah bukaannadii ugu horreeyay ee xarunta markii ay mar labaad uur yeelatay.
“Waxaan aad uga walwalsanaa inay i dhahaan uur ma qaadi kartid, oo aan nafteyda khatar caafimaad u soo jiido,” ayay tiri.
Bella waxaa la dhalay bishii April.
“Waa koox aad u wanaagsan waxaadna dareemeysaa in lagu daryeelayo,” ayay tiri Julie.
Inkastoo ay jirto caawinaadda ay u fidiso bukaannada, haddana Dr Al-Hussaini waxay sheegtay inay caqabado kala kulantay dhaqaatiirta dunida ku nool, taas oo la xiriirta talooyinka ay siiso bukaannadeeda.
“Dalka Mareykanka dhaqaatiirta joogta, way diidaan in uur la qaado kaddib wadno-istaagga,” ayay tiri.
“Balse mar kale, waxaan filayaa inay taas sabab u tahay inaysna jirin baaritaanno badan – balse waxaa hadda socdo baaritaanno badan oo arrinta lagu sameynayo.”
Haweeney ka badbaadday wadno-istaag oo lagu amray inaysan uur qaadin added by admin on 09/11/2018